I-Blackberry Loft - Igugu Elifihliwe - I-Airbnb
I-Blackberry Loft - Igugu Elifihliwe
Templepatrick, Northern Ireland, i-United Kingdom
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Olwyn
U-Olwyn Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo sokuziphekela esisha sha esiyingqayizivele nesifakwe kamnandi; ukulala okungaphezulu kokungu-2, kubekwe endaweni enezinkuni ezolile elungele abathanda imvelo nalabo abazimisele ngokuthola zonke izinto ezikhangayo ezinhle zaseNyakatho Ireland.
Itholakala phakathi kwemayela elingu-1 ukusuka edolobhaneni elincane lase-Templepatrick kanye namamayela angu-4 e-Belfast International Airport. Ibekwe esitezi sesibili, ngeshwa leli fulethi alibafanele abakhubazekile njengoba lingenwa kuphela ngezitebhisi zamatshe.
Indawo ephakeme ekhanyayo, ethokomele enekhishi lesimanje elinehhavini, ihhavini, i-microwave, ifriji, umshini wekhofi nazo zonke izinto ezidingekayo ukuze udale injabulo yokupheka! Indawo enhle yokuphumula! Zenze ukhululeke ekhoneni lokufunda ngoxhaxha lwezincwadi namapheshana amayelana nendawo. Njengoba iyi-loft inophahla oluthambile lonke, kodwa ishawa iwubude obugcwele. Iyakwazi ukufinyelela ezindaweni zokuhlala ngaphandle futhi amabhayisikili ayatholakala uma uwacela. Izivakashi zingajabulela ukubukwa okuhle kwehlathi elivela efasiteleni lekamelo lokulala kanye nezinyoni eziningi zasengadini. Ibhodi labavakashi ligunyaziwe.
Indawo ekahle yokuhlola indawo yasemaphandleni futhi ujabulele ukuhamba kwezwe okude. Kuphakathi nokuhamba ibanga ukusuka e-Templepatrick village, Hilton Hotel kanye nenkundla yegalofu, esanda kuvulwa iRabbit Hotel. Isevisi yokulethwa itholakala ezindaweni zokudlela eziseduze ze-Bamboo ne-Spice.
Indawo emaphakathi kakhulu yokuhlola i-Belfast (imizuzu engu-20) - I-Titanic Quarter kanye neNorth Antrim Coast. I-Antrim Castle Grounds 4 miles, Whitehead kanye neGobbins cliff walk (40mins)
Sihlala endaweni eseceleni kwe-loft futhi sizotholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho. Sinolwazi oluhle kakhulu ngendawo esizungezile, ukuhamba ngezinyawo, izindawo ongazivakashela, izindawo zokudlela ezihamba phambili futhi singaqinisekisa ukuthi unokuhlala kahle kakhulu!
Sihlala endaweni eseceleni kwe-loft futhi sizotholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho. Sinolwazi oluhle kakhulu ngendawo esizungezile, ukuhamba ngezinyawo, izindawo ongazivakashela,…
UOlwyn Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Templepatrick namaphethelo